Te-mitombo tsara kokoa #herbs amin'ity taona ity? Amy ny manana hevitra lehibe ho an'ny
Mitombo anana dia malaza fialamboly ho an'ny mpahandro sy ny zaridaina mitovy. Ny tiako ho lazaina iza no tsy tia ny hevitra ny mandeha avy ao an-tokotany, ary mijinja izay tokony ho zava-maniry ny fomba fanamboarana vaovao avy amin'ny saha? Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny anana izy ireo dia tena ambany dia ambany fikojakojana zavamaniry, izay mahatonga ...
Maro Best House Zavamaniry
Na dia maro ireo zavamaniry maitso dia afaka mitana toerana madio rivotra, mahomby manala ny andraikitry ny fandotoana an-trano, fa vao nohavaozina ny trano iharan'ny simika fandotoana, aloesy, Chlorophytum, Sansevieria sy ny zavamaniry hafa no tena mahomby voajanahary deodorant. NASA mpahay siansa rehefa afaka 20 taona ny R ...
More lahatsoratra momba ny mitombo anana
ny mpitantana ny 18-03-05
Ny vidin'ny anana tahiry ny tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny saha paharitry oregano: Dingana-by-dingana toromarika fanampiny Plant aneta ny swallowtail lolo toerana tena Basil Ny karazany
Zezika ho an'ny fitoeran anana zaridaina
Anana dehibe raha ny amin'ny fitoeran dia hitaky bebe kokoa noho ireo zezika lehibe tao amin'ny saha. Izany satria tsy misy fomba nameno ny otrikaina izy ireo mampiasa ny rehefa maniry. Nefa aza manahy, tsy manana hividy zezika misy raitra manokana noho ny kaontenera, dia afaka mampiasa ny iray ihany zezika ...
Zezika for anana zaridaina
Raha ny mitombo ihany ny sakafo ara-pahasalamana, dia tsara indrindra ny mampiasa voajanahary, zezika organika. Fantatro organika zaridaina dia afaka ho toa mampatahotra, ary ny olona mirona mba hahatratrarana ny zavatra simika, satria toa mora kokoa. Fa niara-niasa tamin'ny natiora, ary ny fampiasana zezika organika ao amin'ny saha dia tsy fahasalamana ...
Kalitao avo voninkazo varotra
Ankehitriny, Shandong Jinan erhuanxi lalana amin'ny Fu Feno voninkazo Lai tsena. Maro ny olona na dia nirohotra mpitsidika ny hifidy sy hividy voninkazo. MS Xue sy ny fianakaviany ho any amin'ny hifidy sy hividy voninkazo. Taorian'ny "fifanarahana fa", MS Xue tavy nividy vola fototra, roa tavy lolo orkide, enin-10 azaleas. Sh ...
Ahoana no handany ao amin'ny voninkazo vilany? Ny dingana ao amin'ny voninkazo vilany
Ny olona tia voninkazo ao amin'ny voninkazo-piompiana amin'ny sasany ny fotoana, tsy maintsy ao ny tavy voninkazo ho an'ny fandidiana, matetika eo amin'ny tavy tokony hitarihana amin'ny fototra mipetra-potsiny, fiandohan'ny lohataona andro ny faran'ny volana febroary ho any tany am-boalohany diabe, ary koa ny tara toy ny voalohany Aprily, tena fototra metabolism dia miadana amin'ny T ...
Tsara vilany ketsa tavy niala firy zavamaniry?
Qingdao Bo famindrana fotsiny de fitow indostria sy ny varotra mpiara., LTD., Ny tany am-boalohany fanetsana, fohifohy wilting Ara-dalàna. Indrindra indrindra noho ny famindrana ny rafitra fototry mihoatra na latsaka no ho vokany eo amin'ny hevitra, rehefa avy famindrana, aoka mangatsiatsiaka, ventilated toerana mora zana afaka andro vitsivitsy ca ...
Maro Best Nursery Zavamaniry
Na dia maro ireo zavamaniry maitso dia afaka manadio ny rivotra, mahomby hanaisotra ny vokatry ny fandotoana an-trano, fa ao amin'ny trano Decorating vaovao amin'ny fandotoana simika, aloesy Vera, bracketplant, sansevieria zavamaniry dia iray amin'ireo sakafo voajanahary mahomby indrindra. NASA mpahay siansa rehefa mihoatra ny 20 taona ...
Ny hevitry ny voninkazo isan-karazany
Tulip tia fiaiken-keloka, ny voninahitra ary ny fitahiana, mandrakizay Tulip (Purple) tsy misy farany ny fitiavana, tia Tulip (fotsy hoditra) tsy manan-tsiny, madio Tulip (mavokely) hatsaran-tarehy, ny fitiavana, ny fahasambarana Tulip (Red) Ny fitiavana no fibabohana, fifaliana Tulip (mavo) ambony, harena, harena Lily malama, ny faniriana tanteraka, mitahy Perfume lilia madio, manan-karena, fampakaram-bady ...